Ogaden News Agency (ONA) – Gudiyada Faracyada Xeryaha Qaxootiga oo kulankoodii meertada ahaa isugu yimid
Gudiyada Faracyada Xeryaha Qaxootiga oo kulankoodii meertada ahaa isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ March 17, 2014
Maalin nimadii Axada taariikhduna ay kubeegnayd 16/3/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay kadhacay shir muhiim ah oo ay isugu yimaadeen gudiyada faracyada ka howlgala Dhadhaab.
Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee ay isugu iman jireen faracyada jaaliyada Ogadenia ee Bariga Africa oo laqabto 2dii biloodba mar si meerta ah oo marba meel lagu qabto ayaa ka qabsoomay xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab.
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen wufuud ka socotay xeryaha Ifo, Xagardheere iyo xerada martida loo ahaa ee Dhagaxlay ayaa furmay abaare 10:00 barqin nimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uusoo jeediyay Sh C/najiib, ka dib waxaa lasii guda galay ajandayaashii shirka iyo qodobo ay dan u arkayeen uguna talagaleen in shirwaynaha lagaga baaraan dago waxaana laqoray qodobo aad ubadan oo loogu talagalay in laga doodo.
Intaas kadib waxaa laguda galay kala warqaatasho waxay qolo kasta ka warbixiyeen deegaankii ay kahowl gali jireen iyo xaalada uu ku suganyahay iyo xaaladaha halgan ee deegaankaas ka jiray iyadoo qola kastana ay carab baabeen in uu jiro hurumar ay ka sameeyeen xaga bulshada siyaasada iyo dhaqaalahaba mudadii u dhaxaysay 2da shir. Waxayna soo bandhigeen tiro iyo tayo kabadan wixii ay soo bandhigeen kal hore.
Mar laga hadlayay xaalada bulsha waynta S.Ogadenia ee kusugan Dhadhaab ayay qolo waliba carabka ku dhufteen in ay jiraan qoxooti horleh oo kasoo qaxay wadanka Ogadenia waxayna sheegeen in ay dadkaasu ubaahan yihiin garab qabasho waxayna sheegeen in ay ku jiraan dad dhibaatooyin lasoo gaadhsiiyay oo isbitaal in la dhigo u baahan.
Dhanka kale gudiga ayaa dib u eegis ku sameeyay wixii lagu balamay in ay qabsoomaan mudada 2da shir u dhaxaysa waxayna isla qireen in waxkasta sidii loogu talagalay uu usocdo. Sidoo kale waxay gudigu soo bandhigeen qodobada ladoonayo in wax laga qabto inta aan lagaadhin shirka ku xiga hadii Allah idmo, waxayna hoosta ka xariiqeen qodobo dhowr ah oo ay isla garteen in wax laga qabto cidii wax kaqaban waydana lagula xisaabtamo.
Dhanka kale gudiga ayaa soo saaray bayaan ay dhowr arimood kaga hadleen waxayna gudigu bayaan kooda ku canbaareeyeen falalka foosha xun ee ay gumaysiga Itoobiya iyo cawaantiisu kula kacayaan dadka shacanka ah ee aan waxba galabsanin waxayna fariin digniin ah udireen kuwa gacan yarayaasha u ah gumaysiga oo ay uga digeen in ay kawaan toobaan falalka xasuuqa ah ee ay samaynayaan inta ay goori goortahay.
Sidoo kale gudiga ayaa bayaan kooda ku xusay bogaadin iyo amaan ay ujeediyeen CWXO ee jabiyay damicii gumaysiga iyo shacabka geesiga ah ee u adkaystay dhibaatada aan kala joogsiga lahayn ee lagu hayo.
Shirkii ayaa soogabagaboobay abaare 4:00 galabnimo wuxuuna kusoo dhamaaday guul iyo jawi aad udagan.